2010 …. Bye Bye ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » 2010 …. Bye Bye …..
2010 …. Bye Bye …..
Posted by fatty on Dec 29, 2010 in News | 24 comments
နေရစ်တော့ ၂၀၁၀ ရေ …။ ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက် လေးတွေကလဲ တကယ့်အမှတ်တရတွေပါဘဲ …။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်ခဲ့တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင့်ပသွားတယ် ..။ ဂီရီဆိုက်ကလုန်းကလဲဆော်သွားသေးတယ် ..။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အပူဒဏ်ကို ကျောကော့အောင်ခံစားလိုက်ကြရတယ် ..။
နှစ်ကူး အတာမှာ အုံးဒိုင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒီလမှာဘဲ ဆရာကြီး သာဂဒိုး ကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်တယ် …။ အော်ဒီနှစ်ထဲမှာ ကြွေလွင့်သူတွေမနဲပါလား ……….။
CTO ခေါ် ဆရာချစ်သိန်းဦး လဲကွယ်လွန် ..။ အသက် ၈၀ ဟာသ မင်းသားကြီး ဦးဂျော်လီဆွေ လဲ အနိစ္စရောက်ရရှာ ..။ မေ၁၆ ရက်က တခါ မင်းသားကြီး သုမောင် ….
မေ ၁၂ ရက်က ဆရာကြီး ကမ္ဘောဇခင်လှိုင် ..။ ရာဇာဓိရာဇ် အေ၇းတော်ပုံကျမ်းပြုသူ
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ …။ ဒါရိုက်တာမောင်နေမျိုး …။ စာရေးဆရာကြီးမိုးဟိန်း ..။ ရုပ်ရှင်
သရုပ်ဆောင် ဒေါ်တင်တင်လှ ..။ တင်သန်းဦး ..။ ဓနုဖြူစိုးသိန်း ….. သူတို့သူတို့တတွေ
ကွယ်လွန်သွား ကြတဲ့နှစ် ၂၀၁၀ လေ …။ ၂၀၁၀ ဟာ မှတ်တမ်းတင်မယ်ဆို တင်ထိုက်တဲ့နှစ်ပါ …။ ဒါပေမဲ့ post တင်လို့မရရင်ခက်မယ် …။
အော်….၂၀၁၀ တောင် နှုတ်ဆက်နေပါပကော၊ ၂၀၁၁ ကလဲတို့ကိုတည်တည်ကြီးနဲ့ကြည့်နေပါလါးကွယ်တို့၊ mandalaygazette မှအပေါင်းအသင်းများအားလုံး နှစ်သစ်မှာကျန်းမာပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ။။
2010 တစ်နှစ်လုံးကို ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် အဖြစ်ပျက်ကောင်းတွေထက် အဖြစ်ပျက်ဆိုးတွေက ပိုပြီးသာလွန်နေသလိုပါပဲ ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အခုတော့ 2010 လက်ပြနုတ်ဆက်နေပါပြီ 2011 မှာရော ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်လာဦးမှာလဲ ? ဂွာသူ ရွာသား အပေါင်းတို့လဲ 2011 မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါစေ …
တစ်နှစ်ကုန်တာမြန်လိုက်တာ အသက်တွေလည်း ပိုပိုကြီးလာပေမဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အတွက် ဘယ်တိုင်းပြည်ဒိုးရင်ကောင်းမလဲ …။
2010 က ရင်နာစရာအပြည့်ပါလားနော်…………….. 2011 ဖြစ်တဲ့ နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်း အားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ……………….
လျှောက်သာလာခဲ့ရတယ် အဲ့လောက်အန္တရာယ်တွေကြားမှာဆိုတာ ခုမှပဲသိတော့တယ်။ 2010 ရဲ့ တစ်ရက်ရက်မှာ ကျနော်သေခဲ့တယ်ဆိုရင် ရွာကလူတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်~~ ခုလောက်ဆိုရင်မေ့သွားတာကြာပေါ့
သဂျီးမင်းအပါအဝင် ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ 2011 မှ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာကို ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ………….
ဆရာ ဦးချစ်သိန်းဦးက ကျွန်မရဲ့ ဆရာဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်… ဆရာဆုံးသွားတာမသိလိုက်ဘူး ..
အားလုံး…. နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အတွက် ၂၀၁၀ အတွက် ၀မ်းသာဝမ်းနဲ ဖြစ်မိတယ် …။ ၂၀၁၁ မှာ တဦးချင်း တယောက်ချင်းဆီ ကြရာ ကဏ္ဍကနေ ကြိုးစားကြတာပေါ့။ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပါစေ …။
အားလုံးသော ရေးဖေါ်ရေးဖက်အပေါင်းတို့ ….။
2010 စထဲက ဆိုးလိုက် တဲ့ အဆိုး ခု နှစ်ကူးဖို့ နှစ်ရက်နဲ့ တပိုင်းကျန်တာတောင် ထွက်ခတ် ခတ်နေသေးတယ်
၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်ရင်း လာမဲ့ အနာဂါတ် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၁ ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
သတ္တ၀ါ အပေါင်းလည်း ဘေးရန် ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲ ကင်းလို့ ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။ သောက ဒေါသ လောဘ တရားများက ကင်းဝေးပြီး သတ္တ၀ါ အချင်းချင်း မုဒိတာ တရားများ ပွားများနိုင်ပါစေ။ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး စာနာ စိတ်နဲ့ ကြင်နာ သနားစိတ်တွေ ပြည့်ဝပြီး သီလ တွေ စောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့ လူသားတွေ များပါစေ။
၂၀၁၁ မှာ မြန် မာ ပြည် သူ တွေ ရွှင် လန်း ချမ်း မြေ. နိုင် မယ် လို ယုံ ကြည် ပါ တယ် ဗျာ ..
(၂၀၁၁ကူးရင် ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ မှတ်တမ်းဝင်အောင် အများနည်းတူမန့်လိုက်အုံးမှ။) အားလုံးဘဲ ၂၀၁၁ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆန်ဒ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုဖို့လောက်ပဲ အားသန်နေတာ အခုလို Bye Bye 2010…….. လို့နှုတ်ဆက်ရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး ဟုတ်တယ်နော်လူတွေဟာ အသစ်တွေ့၇င် အဟောင်းမေ့တယ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အယူအဆတွေ၊ စကားတွေ၊ စကားပုံတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျယ်လို့ မရစကောင်းဘူးနော်
မင်္ဂလာကျက်သရေအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ 2011 ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း၊ အားလုံးပဲ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀တစ်ထပ်တည်းကျနိုင်ကြပါစေ
၂၀၁၀ ကုန်ခါနီးပြီး ဆိုတော့ အဲဒီနှစ်ထဲက ဖြုန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်ပြီး နှမြောမိတယ်။ သူများတွေလို အလုပ်တစ်ခုကို အာရုံစိုက်ပြီး မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး အပြစ်တင်မိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်လာမဲ့ ၂၀၁၁ မှာ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေတော့ ရမိပါတယ်။
(2011 ကို ကြိုဆိုလျက်)
2010 ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ည ၁၂ နာရီမှ တည်စေသော်….
Bye Bye ….2010 it is 9:30 local time
ယူအက်စ်ကတော့ .. နှစ်မကူးသေးဘူး..အခုမှ ညနေ ၄နာရီ..။
နယူးယောက်ကတော့ … နှင်းထုတွေကြားထဲ.. နှစ်ကူးဘော်လုံးနဲ့ကောင့်ဒေါင်းလုပ်ဖို့.. လုပ်နေကြလေရဲ့..။
2011 မှာ မန်းလေးဂဇက်မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး ကျန်းမာပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
မန်းလေးဂဇက်ကြီးလဲ 2011 မှာ ပို့စ်အသစ်တွေကို အလွယ်တကူတင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ….
HaPpY NeW YeAr FoR AlL My FrIeNdS …….
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ (ကြိုတင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)
ကိုခိုင်က အသက် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့လုပ်မယ် ..
ဝေေ၀က အသက် ၃၀ ပြည့် အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်မှာ တစ်ကြိမ် .. တရုတ်ပြည်မှာ တစ်ကြိမ် လုပ်မယ် ..
ဆူးက .. အသက် မပြောတဲ့ မွေးနေ့ကို ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ လုပ်မယ် .. စတိတ်ရှိုး ပါတယ် .. ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲလဲ ပါမယ် ..
ကိုအောင်ဘုက .. အင်းလေးကန် ရေလယ်မှာ ..ရွှေရတု လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲမယ် ..
ကိုဖက်တီးက .. မြေး မလေး မွေးနေ့ကို .. မြစ်ကြီးနား မြစ်ဆုံမှာ လုပ်မယ် ..
အိတုန်က .. အလယ်တန်း (၈တန်း) ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ယူပွဲမှာ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ် ..
မနော်ဖြူက .. ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှန်း မသိအောင် များလှတဲ့ ဘွဲ့ယူ အခမ်းအနား တက်မယ် ..
အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..
မနေ့တနေ့ကမှ .. ၂၂နှစ်ပြည့်တာကို …ပြောရက်တယ်ဗျာ..။
ဒီဒေါက်တာ .. နေမကောင်းဖြစ်ရင် ထိုးနေကျ ဆေးထိုအပ်ထက် ၂ဆကြီးတဲ့အပ်ကြီးနဲ့ ..ပြန်အထိုးခံရပါစေဗျာ..။
မန်းလေးဂေဇက်ကို 2010 ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ကျနော်စတင်ရောက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကော်မင်းတွေကို ဖတ်ရတာ ကိုယ်ကကော်မင်းပြန်ပေးရတာကိုလဲပျော်ပါတယ်။
လူကျန်းမာရေး ဆိုဒ်ကျန်းမာရေး ကော်နက်ရှင်းကျန်းမာရေး ပိုက်ပိုက်ကျန်းမာရေး လျှပ်စစ်ကျန်းမာရေး
ဒီတော့ 2011မှာ စာတွေကောင်းကောင်းရေးချင်ပါတယ်။
2011 ရောက်လာပါပြီခင်ဗျား အားလုံး အန္တရာယ်ကင်ပါစေ
ကွန်တော်တို့ ဂေဇက်တက်ရွာကြီးလည်း သာယာဝပျော်ပါစေ